တရုတ်နှင့် ရုရှား စစ်တပ်များ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပူးတွဲလေကြောင်းကင်းလှည့်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ လေတပ်များသည် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် ပူးတွဲမဟာဗျူဟာမြောက် လေကြောင်းကင်းလှည့်မှုကို နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံမှ H-6K ဗုံးကြဲလေယာဉ်နှစ်စင်းနှင့် ရုရှားနိုင်ငံမှ Tu-95 MC လေယာဉ်နှစ်စင်းတို့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် လေယာဉ်အစုအဖွဲ့သည် ဂျပန်ပင်လယ်နှင့် အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း ကင်းလှည့်ခဲ့ကြောင်း နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနများထံမှ သိရသည်။
ကင်းလှည့်နေစဉ်အတွင်း လေယာဉ်များသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာခဲ့ပြီး အခြားနိုင်ငံများ၏ လေပိုင်နက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ကင်းလှည့်ပျံသန်းမှုသည် တရုတ်နှင့် ရုရှားစစ်တပ်တို့ ပူးတွဲကျင်းပသော တတိယမြောက် လေကြောင်းကင်းလှည့်မှု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ နှစ်နိုင်ငံ စစ်တပ်၏ နှစ်စဉ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော ကင်းလှည့်ခြင်းသည် စစ်တပ်နှစ်ခုကြား မဟာဗျူဟာမြောက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးစွမ်းရည်ကို အားကောင်းစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် တတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအား ပစ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov. 19 (Xinhua) — Chinese and Russian air forces on Friday conductedajoint strategic aerial patrol in the Asia-Pacific region, authorities said.
An aircraft formation composed of two H-6K bombers from China and two Tu-95 MC planes from Russia patrolled over the Sea of Japan and the East China Sea, according to the defense ministries of the two countries.
During the patrol, the planes strictly followed the relevant provisions of international law and did not enter the airspace of any other country, said the military authorities.
It was the third aerial patrol jointly held by Chinese and Russian militaries. The patrol, part of an annual cooperation schedule of the two militaries, was aimed at strengthening the strategic coordination and joint operation capacity between the two militaries and did not targetathird party. Enditem